Diiwaangelinta casriga ah ee ciidamada Soomaaliya | Xaysimo
Home War Diiwaangelinta casriga ah ee ciidamada Soomaaliya
Diiwaangelinta casriga ah ee ciidamada Soomaaliya
Warbixin ka koobnayd in ka badan 160 bog, oo ay diyaariyeen khubaro Qaramada Midoobeey u qaabilsan arrimaha cunna-qabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa looga hadlay diiwaangelinta ciidamada Soomaaliya.
Waxaa arrintaa lagu tilmaamay tallaabo muujineysa in Ciidamada Xoogga Soomaaliya ay AMISOM kala wareegi karaan howlaha nabadgelyada dalka marka la gaaro 2021-ka.
Sida lagu qoray warbixin loo gudbiyay Golaha Amniga oo ay diyaariyeen Khubarada qaabilsan cunna-qabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea, waxaa lagu eegay hir gelinta qorshaha ku meel gaadhka Soomaaliya ee la qaatay April 2018, kaas oo ku talagalku yahay in masuuliyadda nabadgelyada lagala wareego AMISOM oo lagu wareejiyo ciidamada nabadgelyada Soomaaliya marka la gaaro 2021, arintaas oo ku beegmi doonta bixitaanka AMISOM.
Warbixintii AMISOM waxa kale oo ay sheegtay in inkasta oo xoogaga gobolku ay qaateen tabobarro hadana aanu mushaharka si joogto ah loo siinin oo aanay haysan qalab iyo gaadiidka asaasiga ah.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo booqday mid ka mid ah xeryaha ciidamada Danab, 5 September 2019
La taliyaha madaxweyne Farmajo ee dhanka Amnig, Cabdisiciid Muuse Cali oo la hadlay BBC Somalu aya yiri: “Sidaad ogtahay ciidamada waxaa loo diiwaangeliyay si casri ah, akoonkooda waa la yaqaanaa, qoriga ay sitaan waa la calaamadeeyay waana la diiwaan geliyay”.
Lafa gurka arimahaasi wuxu muujiyey in wax ka yar kala badh askarta saddexdaa qaybood (315 ka mid ah 672) la diiwaan geliyey intii hawshaasi socotay.
Qaybta 60 (Baydhabo)
Bishii March ee sannadkii 2018-kii, taliye ku xigeenka qaybta 60-aad ee ciidanka Soomaaliya ee Baydhabo ayaa siiyey SEMG diiwaan uu ku yaal sida hubka loogu qabiyo iyo lambarka askar tiradoodu tahay 277 askari.
In ay tahay goosasho, dhimasho, dhaawac ama wax kalee ilaa laatan lama helin wax suurto gal ah oo muujinaya sababta xukuumada federaalka Soomaaliya taagero u siin wayday gudida.
Qaybta 12-ka April (Muqdisho)
Xerada Janaraal Gordon (Muqdisho)
Warqad ku taariikhaysan 17 May 2018, ayaa la taliyaha ciidamada Soomaaliya ku muujiyey 17 askri oo aan la diiwaan gelin oo kuwo tabobar ku jira loo qoray ay ku jireen xerada Janaraal Gordon.
Gudidu maysan helin wax barbar dhigan askarta diiwaan gashan ee ku jira diiwaanka mushaharka lagu bixiyo ee ku taariikhaysan February 2019.
Deegaannada Gobolka Shabeellaha Hoose ee Guutada Danab ay qabsadeen
Sida ay sheegtay Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, waxay dejisay “siyaasado looga guuleysanayo Al-Shabaab dalka oo dhanna ay kula wareegeyso”.
La taliyaha dhanka Amniga ee Madaxweyne Farmaajo wuxuu yiri: “Siyaasaddu waxa ay tahay, dowladaha na taageera waxay badankooda nagu taageersan yihiin la dagaallanka Al-Shabaab iyo in ay raban in dowlad Soomaaliyeed ay soo noqoto. Tiina waxay tahay in dowladda ay waajibaadkeeda ay gudaneyso.”
Laga bilaabo May ilaa August sannadkan 2019, AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya oo ay taageerayaan ciidamada gaarka ah ee Maraykanka, waxay weerar ku qabsadeen tuulooyin istaraataji ah oo ku yaal Shabeellaha Hoose oo ay haysteen Al-Shabaab.
Hawl galada nabadgeyo waxaa si buuxda loogu qabsaday tuulooyinka Bariirre, Sabiid, Caanoole iyo Awdheegle oo dhamaantood 50km u jira Muqdisho.
Hawlgalladaas waxay matalayeen horumar muuqda oo lagu xajiijinayo nabadgelyada Muqdisho maadaama meelaha la qabsaday ay ahaayeen meelo laga soo galo oo uu soo maro gaadiidka Al-Shabaab u adeegsato daadgureynta dagaalyahannadeeda iyo walxaha qarxa ee Muqdisho lagu wado.
Hase yeeshee 14-kii August ee sannadkan, Al-Shabaab waxay qaadeen weerarro abaabulan oo ay la beegsadeen Awdheegle, iyagoo adeegsanaya saddex gaadhi oo walxaha qarxa lagu rakibay, madaafiic iyo askar.
Weerarkaa waxa dib u celiyey AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya laakiin saldhigaasi halis ayuu ku jiraa sababta oo ah Al-Shabaab ayaa jooga magaalada u dhaw ee Mubaarak halkaas oo hore loogu aqoonsaday in ay tahay goob lagu soo rakibo walxaha qarxa iyo gaadiidka lagu soo rakibo ee gala Muqdisho.
Ciidamada Xoogga Soomaaliya oo la wareegay Awdheegle oo dejinaya calanka Al-Shabaab
“Ciidamada waxay la dagaallamayaa cadow, shacabka iyo dowladda halis ku ah”, ayuu yiri Cabdisiciid oo madaxweynaha la taliye u ah.
Wuxuu hadalka ku daray: “Ujeedada ciidan loo hubeynaayo ma ahan in cid kale lagu dhibaateeyo ee waxaa weeyaan in dalka iyo qarannimada iyo sharafta dadka Soomaalida ah lagu difaco. Ciidanku hadeynaan hubeysnayn oo qalabeysnayn, markaa waxaa la noqonayaa laba ciidan oo isku hub wata. Marka ma ahan nidhaamka caalamiga ah ee dowladnimada”.
Guusha mustaqbalka fog ee hawlgallada nabadgelyada Shabeelaha Hoose wuxu ku xidhnaan doonaa kartida dawlada federaalka ay ku samayn karto ciidamo halkaa jilibka ku aasta, iyo in maamul iyo adeega bulshada oo dadka halkaa degan loo fidiyo.
Ciidamada Ahlu Sunna ee lagu daray Ciidamada dowladda federaalka
Todobaadkii ugu dambeeyey bishii June ee sannadkan 2019, dawladda federaalku waxay shaacisay in koox wayn oo ka tirsan Ahlu Sunna Wal Jamaaca – oo ah Suufiyada taageerada ka helayay Itoobiya oo la aasaasay 1991 isla markaana ah quwad adag oo ka hortagi karta Al-Shabaab – lagu darayo Ciidamada Amniga ee Federaalka.
In Ahlu Sunna Wal Jamaaca lagu daro ciidamada federaalku waxay matalaysaa talaabo muhiim ah oo xoogga Soomaaliya kagala wareegi karaan AMISOM masuuliyadda amniga dalka.
Diiwaan gelintii ciidamada Ahlu Sunna
Guushaas waxay ku xirantahay sida dawlada federaalku u aqbasho dalabka kooxdaas ku doonayso in awoodda mamulka wax laga siiyo iyo dhaqaalaha, iyada oo aan waxba loo dhimin kartida Ahlu Sunna Wal Jamaaca kaga hortagi karto Al-Shabaab ama aan la faquuqin kooxaha kale ee siyaasadeed ee Galmudug.
Qorshaha ku meel gaadhka ee ka bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya
16-kii February 2019-kii, taliyeyaasha milatari ee AMISOM waxay isla meel dhigeen arrimaha hawl gallada sida loo fulinayo iyada oo la raacayo xeerka hawl gallada ee 2018-2021, kaas oo la ansixiyey 26 November 2018-kii, isla markaana uu aqbalay Golaha Nabadda iyo Amniga Midowga Afrika, 9 February 2019-kii.
Sida uu dhigayo xeerka hawlgallada, AMISOM waxay wadi doontaa bixitaankeeda iyo ku wareejinta masuuliyada ciidamada Soomaaliya mudadaa la cayimay:
Akademi milatarioo Muqdisho ku taala ayaa lagu wareejiyey Ciidamada dawlada federaalka ah 28 February 2019. Illaa 500 oo ah ciidamada Burundi oo halkaasi fadhiisin u ahayd ayaa meel kale loo raray. 200 oo ka mid ah waxa la geeyey Maslax oo 20km dhanka bari ka xigta Muqdisho iyo 300 oo Jowhar la geeyey iyo saldhigyada hawlgallada jiida hore ee qaybta 5-aad.
Bishii February 2019, qiyaastii 1,000 ciidamada Burundi ah oo fadhigoodu ahaa Hirshabeelle ayaa bilaabay bixitaankoodii qorshaysnaa taas oo waafaqsan shuruudaha ku yaalla faqrada 5-aad ee qaraarka Golaha Ammaanka ee tirsigiisu yahay 2431 (2018), bixitaankaa waxa la dhamaystiray 5 April 2019.